Otu esi atụgharị NON-WWW & WWW na Nginx - LinuxCapable
Otu esi ebugharị NON-WWW & WWW na Nginx
November 2, 2021 July 14, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1: Redirect NON-WWW gaa WWW
Nhọrọ 2: Bugharịa WWW gaa na-abụghị WWW
na-abụghị www gaa www ule redirection
www na-abụghị www nlegharị anya ntụgharị
Mgbe ị nwere weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa na-agba ọsọ Nginx, ọ bụ ihe na-achọsi ike ikwe ka ndị ọbịa nweta ngalaba ahụ site na iji ụdị www na ndị na-abụghị www nke aha ngalaba gị. Otú ọ dị, n'oge a nke Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta na ndị ọrụ na-achọ ahụmahụ nchọgharị ngwa ngwa ma dị mfe, inwe njikọ URL abụọ nwere ike imetụta ahụmahụ zuru ezu nke weebụsaịtị gị n'ụzọ na-adịghị mma. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ị ga-ahapụrịrị otu ụzọ ndị ọbịa gị si enweta saịtị ahụ. Kama, ịtọlite ​​​​redirection dị mfe nwere ike imeziwanye ahụmịhe ndị ọbịa webụsaịtị gị, welie nnabata backlink ngwa ngwa, ma melite ogo SEO.
N'ime ntuziaka dị n'okpuru, ị ga-amụta iji otu esi emegharị www URL na ndị na-abụghị www, dịka ọmụmaatụ (www.example.com) na (ihe atụ.com) na vice versa na a redirect ka a na-akpọ a Ntugharị na-adịgide adịgide, ma ọ bụ "301 redirects", Enwere ike ime nke a na sistemụ arụmọrụ ọ bụla site na iji Nginx, ihe atụ bụ maka ihe nkesa naanị. Ha anaghị akọwa otu esi edozi ndị a ma ọ bụ otu esi etinye Nginx.
OS akwadoro: Sistemụ Linux ọ bụla nwere ike ịgba ọsọ Nginx
Ngwungwu akwadoro: curl
Wụnye curl Centos/Rocky Linux/Rhel/Oracle:
Wụnye curl Debian/Ubuntu/Linux Mint:
N'ihe atụ nke mbụ, ị ga-agbakwunye koodu dị n'okpuru n'elu nke dị adị (www) ngọngọ aha ihe nkesa iji redirect ndị ọbịa niile kụrụ URL na-abụghị www gaa na naanị www URL.
Mara, jide n'aka ($request_uri) ewepụghị n'ihi na nke a nwere ike ịkpata nsogbu na njikọ niile na-abụghị www naanị na-atụgharị azụ na ibe ụlọ gị.
Ọmụmaatụ nke a bụ https://example.com/random-topic. Ọ bụrụ na agbakwunyeghị ($ request_uri), ọ ga-atụgharị gaa na www.example.com kama https://www.example.com/random-topic, nke ga-akụda ndị ọbịa gị gbakwunyere mebie ogo nchọta ọchụchọ gị na ndị na-eri anụ na-enweta. mgbagwoju anya.
N'ọmụmaatụ nke abụọ, ị ga-agbakwunye koodu dị n'okpuru n'elu nke dị adị (abụghị www) ngọngọ aha ihe nkesa iji redirect ndị ọbịa niile kụrụ www URL gaa na URL na-abụghị www.
Dị ka e kwuru na njedebe nke Nhọrọ 1, jide n'aka ($request_uri) adịghị ewepụ. Nke a bụ akụkụ dị mkpa.
Mara, jide n'aka na itinye asambodo na igodo maka ntụgharị HTTPS ma ọ bụ nwee nsogbu.
Tupu ịmalitegharị ihe atụ Nginx gị, ọ kacha mma ịme ọsọ akọrọ iji hụ na enweghị mmejọ na ihe ị gbakwunyere. Iji nwalee, mebie iwu a:
Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, ị ga-enweta nsonaazụ ndị a:
Gaa n'ihu ịmalitegharị ọrụ Nginx gị ka ime mgbanwe ndị a dị ndụ:
Ọ bụ ya! Ị dechara ntụgharịgharị ahụ. Iji nwalee ma redirection na-arụ ọrụ, mee ihe ndị a:
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala otu esi etinye ngwa ngwa na www ma na-abụghị www ntụziaka na ngọngọ saịtị Nginx gị, nke ga-eme ka ahụmịhe nke ndị ọbịa gị dịkwuo mma site na ịga na otu URL kama ịbụ abụọ.
Dị ka akọwara na mmalite nke ntuziaka ahụ, SEO na-aghọwanye ihe dị oké mkpa, engines ọchụchọ na-edeba ebe nrụọrụ weebụ mgbe nile, na inwe URL abụọ nwere ọdịnaya nwere ike ịmepụta bụ nnukwu akara uhie megide ebe nrụọrụ weebụ gị. Ịgbakwunye redirection a nwere ike ịkwalite ogo gị na backlinks gị ngwa ngwa.
Categories Nkuzi nkesa Tags NGINX Mail igodo
Otu esi etinye Shlink URL Shortener na Nginx na Ubuntu 20.04